China Jewelry laser spot welding machine mpanamboatra sy mpamatsy | Suntop
Masinina welding lasitra laser
Masinina lasira laser amin'ny firavaka ny fampidirana:
Ity masinina ity dia natao manokana ho an'ny firavaka sy vokatra vy kely hafa misy las welding laser, izay ampiasaina amin'ny fantsom-pandrefesana metaly isan-karazany.
Ny fantsom-panazavana amin'ny laser dia lafiny iray manan-danja amin'ny teknolojia fanodinana fitaovana laser, iray amin'ny fizotran'ny fantsom-panafody dia ny fitarihana hafanana, izany hoe ny fantsom-panafenana ny taratra laser, ny hafanan'ny tany mankany amin'ny fanaparitaka anatiny amin'ny alàlan'ny fitarihana hafanana, amin'ny alàlan'ny fifehezana ny sakan'ny pulsa laser, angovo, hery fara tampony ary famerimberenana miverimberina, ny masontsivana toy ny fanalefahana singa, mba hamoronana dobo anidina manokana.
Noho ny tombony manokana ananany dia nampiasaina tamim-pahombiazana tamin'ny fanodinana firavaka volamena sy volafotsy ary famafana ny faritra kely sy bitika izy.
Ny fitsipika iasan'ny rafitra fametahana laser dia ny teknolojia fanamafisam-peo misy angovo avo lenta sy toerana afovoany, izay afaka miatrika ny fametahana sy ny fanamboarana ny faritra madinidinika rehetra, ary manonitra ny tsy fahampian'ny teknolojia fantsom-panaon'ny argon nentim-paharazana amin'ny fanamboarana sy welding tsara ambonin'ny.
Sorohina ny tokonam-baravarana roa amin'ny fantsom-panafana sy ny fitsaboana aorian'ny fitsaboana, izay mamonjy be ny famokarana bobongolo.
Laser welder dia ampiasaina indrindra amin'ny famenoana ny lavaka sy ny fanamafisana ny firavaka volamena sy volafotsy, ary azo ampiasaina ho an'ny fantsom-batana mangatsiaka amin'ny vy mahery, mametaka vy mahery, vy vy nikela, vy avo lenta, firaka varahina, varahina beryllium , firavaka alimina avo lenta, volamena, volafotsy ary fitaovana vy hafa.
Ny milina fantsom-boasary laser SUNTOP Jewelry no tena mampiavaka azy:
Ny milina iray manontolo dia azo apetraka amin'ny birao, endrika vita anaty rano-milamina, toerana kely.
Ny angovo, ny sakany amin'ny pulso, ny refin'ny hatetika, ny haben'ny toerana dia azo ahitsy amina toerana marobe, hahatratrarana effets valizy.
Ny masontsivana dia ahitsy amin'ny tehina fanaraha-maso ao amin'ny lavaka mihidy, izay tsotra sy mahomby.
Ny fampiasana ny lavaka famonoana seramika any ivelany any Grande-Bretagne, ny fanoherana ny harafesina, ny fanoherana ny hafanana avo lenta, ny fahombiazan'ny fiovan'ny fotodrafitrika avo lenta, ny fiainana ao anaty lavaka (8-10 taona), ny fiainana jiro xenon mihoatra ny in-8 tapitrisa.
Ny fehiloha mifanentana, esory ny fientanam-po amin'ny maso amin'ny ora fiasana.
Miaraka amin'ny fahaiza-miasa maharitra 24 ora, milamina ny fampisehoana milina iray manontolo.
Famolavolana mahaolona, ​​ergonomika, ora fiasana lava tsy misy reraka.
Tombony lehibe: hafainganam-pandeha haingana, fahombiazana avo, lalina lalina, fiovana kely, faritra misy ny hafanana kely, kalitao avo lenta, tsy misy loto, avo lenta ary fiarovana ny tontolo iainana.
Ny masontsivana lehibe an'ny milina fantsom-boasary laser:
Max. hery laser 150W
Fanjifana herinaratra tanteraka 5KW
Laser mifantoka 110mm
Laser pulse matetika miverimberina ≤0.1-20Hz
Fiarovana amin'ny rano TM 10-30 diplaoma
Laser sakany pulsa ≤20ms
Entona fiarovana laser Lalana 1
Herin'aratra 220V / 50Hz / 20a
lafiny 900 * 500 * 600mm
Milanja lanjan'ilay milina 80KG
Ny sary vita amin'ny lasera laser amin'ny firavaka tena izy:
Previous: Masinina laser vita amin'ny laser vita amin'ny tanana
Manaraka: Masinina fanapahana laser sy sokitra CO2
Pipe Fiber Laser Cutter, Masinina manapaka laser, Tube Laser Cutter, Masinina fanapahana fantsom-laser, Masinina fanapahana laser fibre China, Masinina manapaka fantsom-laser,